Imishini esakhelwe ngaphakathi usimisé saqina eyenzeke emakhishini ethu. Shumeka konke kusuka imishini yokuwasha ziphethe fryers kanye Ohhavini. Hhayi sekudlule le ndebe futhi microwave Ohhavini, okuyinto ezinye ezivamile yasendlini ekhishini Imishini. Kulesi sihloko, sizama ukuqonda iziphi esakhelwe microwave Ohhavini?
Injongo eyinhloko zikagesi esakhelwe - lula futhi umnotho isikhala. Ngokusho ukusebenza okwakhelwe ku-microwave azihlukile kakhulu kusukela evamile, kodwa ngenxa yokuthi somlilo ngqo bafakwe ifenisha ekhishini, kahle sigcwalisa emaqaqasini ekhishini. Modern Microwave amaziko can kakhulu. Ingabe izici ezengeziwe microwave Ungashintshanisa hhayi kuphela kuhhavini kodwa hob. Esakhelwe ngaphakathi microwave Ohhavini zikuvumela ukuthi ulondoloze hhayi kuphela isikhala ekhishini, kodwa futhi isikhathi. Microwave iba esisemqoka uma udinga okuthile reheat ngokushesha noma eneqhwa. I ukusetshenziswa athandwa kakhulu microwave ne hlupha. Kungenzeka ukulungiselela inkukhu okumnandi nge uqweqwe crispy. Ngaphandle umsebenzi hlupha, imethrikhi ingaba nezinye izici engengaphansi ewusizo. Kungenzeka ukucisha inyama, ukupheka imifino ubhake ophaya. Konke lokhu kungenziwa ku-microwave, ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi. Nge eziningi ezihlaba umxhwele imisebenzi, microwave kakhulu ukubuyeka kagesi noma igesi kuhhavini. Ubukhulu Thobekile enze kube nokwenzeka ukuba ukwakha imethrikhi sanoma yisiphi niche khulula ekhishini. Eliphekwe imikhiqizo microwave zayo izimfanelo ukunambitheka akahlukile labo okuphekwe kuhhavini. Okuwukuphela umehluko - indlela lokucubungula imikhiqizo. Uma kuhhavini isetshenziswa ngalezi zinjongo, igesi yemvelo noma ugesi, e-microwave Ohhavini - amagagasi imvamisa ultrahigh. Waphatha ngale ndlela imikhiqizo musa asiyona usongo abantu. Ukuvikela umzimba kusuka microwave emisebeni ngokuphephile isehlane, nesikhathi umnyango lisetshenzisiwe net ukuphepha. Omunye umehluko kusuka microwave oven noma hob ukuthi akudingeki ukuba ulungise amandla ezingeni zone ukupheka. Uhlelo ekhethekile ezikhethiwe ukulungiswa umkhiqizo, izophila ukugada inqubo.
Kwimakethe isikhathi eside lo mkhuba kuyinto ngempela nesidingo esinamandla esishunyekiwe yasendlini kanye ikhishi Imishini. Esakhelwe ngaphakathi microwave Ohhavini usanda zithandwe ukusebenzisa hhayi ngaphansi kuka plate futhi kuhhavini. Lokhu zingachazwa ngezinqubo yokuthi izindleko microwave oven lingaphansi kakhulu, futhi isikhala ekhishini uzodinga kancane ke. Ama-microwave kukhona ukonga kakhulu ngokuya nje uma eqhathaniswa naso ugesi ukusetshenziswa izitofu kagesi. Ezihlukahlukene imibala ikuvumela ngempumelelo ukuhlanganisa microwave kunoma ifenisha ekhishini. kukho olukhulu ngeke yakhiwe microwave imhlophe ilungele imibala ekhishini ukukhanya. Ngokungafani kuhhavini, imethrikhi ngeke kukwenze stuffiness ngokweqile ekhishini, futhi ngaleyo ndlela, umnikazi uyobe ukhululekile ukuqaleka njalo elihlobene ne nokulungiselela ukudla. Esakhelwe ngaphakathi microwave kuhhavini donsa eside babemhlonipha abasebenzisi sibonga izimfanelo lula, induduzo, ukusebenza, usayizi amancane kungenzeka hhayi kuphela ingaphakathi ekhaya ekhishini, kodwa futhi ehhovisi.
Namuhla, ukukhiqizwa okushunyekiwe microwave Ohhavini bekwi izinkampani emhlabeni-class, okusho ukuthi balaba basizi kubalulekile yasekhaya phambi ngokuzuma. Ngiphephile funa ezinhle phakathi baseRussia wajabulela imikhiqizo enjalo izinkampani odumile njengoba Electrolux, Bosch futhi Siemens. Ngokuvamile, iningi models ngisho abakhiqizi ezahlukene imisebenzi efana, bangakwazi kuhluke kuphela igama. Khetha microwave kumele kusekelwe izintandokazi zakho siqu. Uma ngabe injongo eyinhloko ye-microwave oven izokuba kuphela defrosting noma reheating ukudla, khona-ke akwenzi mqondo overpay for a lot of izici engadingekile. Labo sina isinqumo ukupheka kuhhavini microwave, kufanele sinake microwave, okunikeza ngoba umsebenzi hlupha nezinhlelo etholakalayo ukupheka isidlo esithile.
Ukukhishwa kwomoya kwangaphandle - ukubuyekezwa nezincomo
Ultrasonic Ibanga: imfundo, imodeli Izibuyekezo
Izikhumbuzo Syktyvkar - Umlando we edolobheni
Theory Kant sika Ulwazi - Material uMbiko
Yagoda goji - ukubuyekezwa odokotela. Ukusetshenziswa kwamajijiji e-goji. I-Tibetan goji berries - izibuyekezo